Sei negadziriro yeparutivi iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekuita iPhone backup
Nharembozha dzedu dzave kuvimba nekushamwaridzana uye shamwari inoziva zvese nezvedu. Mavari tinochengeta ruzivo rwakakosha rwakawanda uye imwe isingakoshe zvakadaro, asi hapana chikonzero chatingade kurasikirwa nacho. Vanofambidzana, kugadzwa, marongero uye kunyange mitambo yemitambo yatakaisa mari yakawanda nguva uye mairi chinhu chekupedzisira chatinoda kutanga patsva. Zvingave sei neimwe nzira, nzira yakanakisa yekusarasa chero data ndeyekuita kopi yekuchengetedza.
Kugadzira backup ye iPhone yedu ibasa rakareruka. Tine nzira mbiri dzekugadzira backup: chengetedza iyo kopi pakombuta yedu uye chengetedza iyo kopi muICloud. Tevere tinokuratidza matanho ekuchengetedza backup yedu zvese pakombuta yedu uye muICloud.
1 Maitiro ekugadzira kopi yekuchengetedza yeiyo iPhone pakombuta yedu
2 Sei Backup iPhone kuICloud
Maitiro ekugadzira kopi yekuchengetedza yeiyo iPhone pakombuta yedu
Tinodzvanya pane iyo dhizaini yekushandisa.
Tinodzvanya pane iyo device tinoda kutsigira.
Tinomaka Iyi komputa.
Tinodzvanya pa Gadzira kopi izvozvi.
Mune yekupedzisira skrini, tinogona zvakare kumaka "Vhura iTunes kana uchibatanidza iyo iPhone", kuitira kuti pese patinobatanidza chishandiso, iTunes ichavhura uye ichatanga kugadzira backup otomatiki.
Kugadzira kopi yekuchengetedza pakombuta yedu isu tichaponesa zvese pane yedu Mac / PC. Ichangosara muICloud, kana isu takagadziriswa, ajenda, zvinyorwa, zviyeuchidzo, nezvimwe. Paunenge uchidzosera iyo kopi, iTunes icharasa rese data rekushandisa uye marongero kune yedu iPhone, pamwe nekuteedzera izvo zvinoshandiswa.
Sei Backup iPhone kuICloud
Pane nzira mbiri dzekutsigira kuICloud, imwe kubva pane yako kifaa uye imwe kubva kuTunes. Kana isu tichida kuzviita kubva iTunes, isu tinoteedzera apfuura matanho kuchinja nhanho 4, iyo ticha tora paICloud panzvimbo peiyi komputa. Kugadzira kopi kubva pachigadzirwa, isu tinoteedzera anotevera matanho:
Tiri kuenda Zvirongwa / iCloud.
Tiri kuenda Backup.
Isu tinoshandisa ICloud kopi. Isu tinowana meseji yekuyambira ichiti iyo backup kopi haichazochengetedzwa pakombuta.
Takatamba pa Backup ikozvino.
Nekuita iyo backup muICloud, yedu iPhone inozobvunza gore uye kurodha pasi marongero nedata kubva pairi. Zvikumbiro zvinotorwa zvakare kubva kuApp Store, saka zvinokurudzirwa kuti ubatanidzwe kunetiweki yeWiFi uye, zvichienderana nekubatana kwedu, iva nemoyo murefu.
With edu negadziriro yeparutivi zvaitika, tinogona kuva nechokwadi kuti hatizorasikirwi chero mashoko kana tichifanira kudzorera mudziyo wedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuita iPhone backup
Ndakaita backup ku5S paPC yangu ndokuzoenda ku6, asi ruzivo rwekurapa haruna kupfuura.
Ini ndinobvunza kuti: Kana ndikadzorera iyo michina ndikaisa iyo kopi, iyo data rekurapa richaonekwa; Ndekupi kwandingaone kana iro rekurapa data rapfuudzwa kana kwete?
Manheru akanaka, ini ndoda kuita backup photos, mavhidhiyo, mumhanzi uye maapps pakombuta yangu ndobva ndazvidzorera kune iphone 6, zvinoita here izvi?
iOS 8.3 inodzivirira kupinda kune zvinoshandiswa
iOS 8.3 inorambidza kuwana kune iPhone memory